Waxaa uu noqonayaa mid aad u qaali ah si ay mar walba soo bixi heeso aad iPhone oo mararka qaarkood aad u baahan tahay waxaa laga yaabaa in wareejinta dhamaan xogta aad music CD in aad iPhone. Marxaladani waxay noqon kartaa mid aad waxtar markaas waxaad awoodi kartaa in ay dhagaystaan ​​gabayada ee aad dooratay ee aad iPhone oo aan haysan si ay u soo bixi waxay mar kasta dukaanka Lugood iyo qayb ka mid ah ugu wanaagsan ee aan u baahnaan doontaa inaad bixiso. Maqaalkani waxa uu soo bandhigayaa in aad u fudud oo la fahmi karo marka la eego tallaabooyinka kuu raaci kari waayay in ay ka CD wareejiyo music inay iPhone. Waxaa ka mid ah Screenshot cad si aad aan la kulmaan dhibaato ka mid ah tallaabooyinka. Reading Happy.
Habka 1. Sidee si ay u gudbiyaan CD si iPhone via Lugood
Habka 2. Sidee si ay u gudbiyaan Music ka CD si iPhone la TunesGo Wondershare
Habka 3. Sidee si ay u gudbiyaan Songs ka CD si iPhone la Imtoo
Talaabada 1: aad Music saar ka CD in Lugood
Waa hagaag, ma ahan sida haddii aad doonaysid in aad dooxi off heesaha oo ka CD sida haddii aad dooxi off button ka maaliyada. Geedi socodka looga baahan yahay, waayo, taasu waa ka yara duwan (oo aan u baahnayn ciidan aad u caayaan!).
Geli CD ee CD-ROM of your computer, doorbidaa Mac OS laakiin daaqadaha ayaa sidoo kale ka shaqeyn doonaan. Fur software Lugood ah. Waxaan rajeyneynaa in aad hore u soo bixi software Lugood ah oo lagu rakibay ee your computer. Haddii aan, waa laga heli karaa website-ka Apple, download Lugood si deg deg ah oo ku xidh in your computer. Hadda dhaqaaq on, kaliya furto Lugood ah.
Waxaa hubaal ah tani waa shaashadda in la furo doonaa. Haddii aan, falgali in albums adigoo gujinaya ah "Warsame Qaasaali" tab ee ugu sareysa xarunta ee shaashadda ah.
Ka dib markii CD waxaa ku raran yihiin, iyo CD-ROM u akhriya, sanduuqa fariin arbushin doonaa waydiiyaan haddii aad rabto in aad Lugood inay dajiyaan music ka CD ah. Guji "HAA" oo aad ku fiican tahay inuu tago. Waxa kale oo aad eegi kartaa sanduuqa "Ha mar kale i weydiiso" haddii aad doonayso inaad talaabo hore in si toos ah la buuxiyo marka xigta ee aad geliso CD halka Lugood waxaa socda.
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad riix 'HAA' button, Lugood bilaaban doonaa tallaabo oo bilaabi doonaan in ay nuqul heesaha oo ka CD maktabadda Lugood ah.
Kadib markii geedi socodka is dhamaystiri doono, taas oo qaadan doona wax badan oo waqti ku xiran baaxadda xogta ee disk, Lugood aad keento doonaa in talaabada ugu horeysa ee heesaha oo ka CD in Lugood wareejinta la dhamaystiro.
Tani waa dhamaadka TALAABADA KOOWAAD. Dhaqaaq on tallaabada labo ka mid ah geeddi-socodka.
Talaabada 2: iibsiga songs ku raran yihiin in aad iPhone.
Tallaabada laba lug leh wareejinta songs maktabadda helay ka CD in Lugood si aad iPhone. Waayo, kanu, waa in aad marka hore la abuuro playlist ah ee Lugood, kaas oo ka mid ah heesaha laga keeno oo keliya by CD ah. Samee playlist cusub ka tab faylka.
Hadda xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka la cable USB ah. In galeeysid bidix, guji si aad iPhone hoos "AALADAHA". In guddi saxda ah, guji "Music" oo guji "nidaameed Music". Markaas, shilinta "Xulay playlists, fannaaniin, albums, iyo qaybaha".
Sidaas, waxaad si fudud u nuqul ka kartaa music ka CD si iPhone. Si kastaba ha ahaatee, hal shay waa in aad mar kasta Lugood syncs music aad iPhone, heesaha oo dhan ka jira ee aad iPhone laga saari doonaa. Waa arrin aad looga cabsado, haddii heesaha oo dhan aad iPhone yihiin asalka ah. Si looga fogaado in, waxaad isku dayi kartaa habka 2 si ay u gudbiyaan music inay iPhone ka dib ku dar heeso ka CD in Lugood.
Habka 2. Sidee si ay u gudbiyaan Music ka CD si iPhone la Wondershare
TunesGo Wondershare TunesGo (Win) ama Wondershare TunesGo (Mac) waa software ah oo Eebaha idiinka yeelay marka aad kor u quudin isticmaalaya madal adag ee software Lugood ah. TunesGo waa badan fudud oo si fiican u raadinaya software laga heli karaa labada dhufto ee Macintosh iyo daaqadaha oo bilaash ah. Fadlan kala soo bixi uga website-ka rasmiga tutorial tan ka fiican in la fahmo.
TunesGo waxaa asal ahaan loo isticmaalaa in lagu soo dhoofsadaan music, video ka computer ama Lugood si iPhone aan ka saareen wax. Intaa waxaa dheer, waxa ay dhoofin karaan music iyo video ka iPhone in computer ama Lugood effortlessly. Halkan, waxaan inta badan diirada saaraan oo muujinaysa sida ay u ka CD wareejiyo music inay iPhone aad.
Tutorial soo socda ka dhigi doonaa fudud aad u.
Tallaabada 1. Marka hore, waxaad u baahan doontaa si ay u gudbiyaan waxyaabaha CD ah in software Lugood ah. Waa arrin aad u fudud oo hore u sharxay qaybta hore. Tallaabada 2. Run Wondershare TunesGo Win ama version Mac on your computer sida ay OS computer aad. Connect aad iPhone in kombiyuutarka la cable USB ah.
Tallaabada 3. In uu furmo suuqa hoose, guji "Playlists". In guddi saxda ah, guji "Music", ku dar warbaahinta adigoo riixaya batanka ku dar. Tallaabada 4. In menu hoos-hoos, dooran dar Lugood Playlists. Dooro playlist meesha aad ku badbaadin heesaha CD ah iyo waxa ay sii kordhineysaa in aad iPhone
Imtoo waa s software sameeyey dadka aawadiis ee dadka jecel DVD filimada. Waxaa loo isticmaali karaa in dooxi off xogta laga DVD ah iyo wareejiyo xogta si iPhone ah. In kastoo asal ahaan waxa loo adeegsadaa in lagu dooxi off xogta ka iyo DVD iyo badalo xogta in qaab kasta oo looga baahan yahay, laakiin software-ka waa mid fudud oo ku filan oo si fudud loo isticmaali karaa in lagu xog ka PC si iPhone wareejiyo.
Baro wax badan oo ku saabsan Imtoo >>
Habka sida ay u gudbiyaan DVD si iPhone waa iska sahlan oo kaliya ku lug guji laba ama saddex badhamada ka dib marka aad ku xidhi aad iPhone. Just dooro heesaha, oo guji badhanka hoose ee shaashadda.
Software waa mid aad u fudud in la isticmaalo oo u baahan hanad ma jiro qayb ka mid ah ugu daran waa in ay lacag la'aan ah oo aan u baahan tahay $ 30, taas oo ay noqon kartaa wax badan oo ka mid ah qiimaha inay bixiyaan software sida maalmahan.
> Resource > iPhone > 3 Hababka si ay u gudbiyaan Songs ka CD si iPhone